Maalinta: Febraayo 11, 2020
Joojinta xirmooyinka qaboojiyaha xiran ee ay hirgalinayso Dowlada Hoose ee Erzincan ayaa loo diyaariyay muwaadiniinta qeybaheeda kala duwan ee magaalada. Joogsiga baska ee raaxada ee dhowaan la dhisay ee Halit Pasha Street ayaa la galiyay. Joojinta qaboojiyaha ayaa ka joogsata muwaadiniinta [More ...]
Baaskiillada Dawlada Hoose ee Magaaladda ayaa galay xilli cusub sidii duufaan oo kale. Saddexda tartan ee ugu horreeya xilli ciyaareedka cusub, Kooxda Gawaarida Caadiyan, oo ku guuleysatay 3 dahab, 3 qalin iyo 1 billadood oo naxaas ah oo aan ka soo bixin kursiga keydka, ayaa sidoo kale ahaa International [More ...]
Madaxweynaha Turkiga Kamu-Sen Önder Kahveci, ayuu yiri TÜVASAŞ mar dambe awood u soo saara baabuurta rail in ay yihiin laga keeno dibadda iyo in madfac ku soo jabay. Madaxweynaha Turkiga Kamu-Sen Önder Kahveci, ee Turkish Gaadiidka-Waxaad [More ...]
Press on February 11, 2020 by Gudoomiyaha TMMOB Emin Koramaz oo laxiriira hanaanka sharciga ah oo ay Bixisay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta Go'aanka togan ee EIA ee ku saabsan Mashruuca Kanal Istanbul. [More ...]
Bursa Teleferik AŞ ayaa ku dhawaaqday in duullimaadyada ay mar kale bilaabi doonaan 14.30 maaddaama dabayshu ay caadi kusoo laabaneyso. Gaariga fiilada, oo bixiya gaadiid kale oo udhaxeeya bartamaha magaalada Bursa iyo Uludag, lama dhisi karo subaxa hore, sababtoo ah hoos udhaca saameynta dabaysha. [More ...]
Maxey tahay sababta Haydapapaşa Station ay u sii ahaato xarun ahaan, maahan hoteel, matxaf, suuq laga dukaameysto ama wax kale? Waxaan ku adkeysaneynaa codsigan. Ku adkaysashadayadu waxay ka timid xaqiiqda ah in Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa aysan ahayn goob madhan. Waxaa intaa dheer, isticmaalka Gar [More ...]
Duqa Magaalada Melikgazi oo sheegay in laga gudbi doono isgoyska tareenka si loogu helo gaadiid aamin ah oo taxaddar leh. Mustafa Palancıoğlu; Si qulqulka baabuurtu magaalada u noqdo mid dhaqso badan, wax ku ool ah oo amaan ah, qaar badan oo ka mid ah magaalada [More ...]
In Turkey ee sanadka 2019 1 348 729 natiijooyinka iibka guryaha ayaa gacmaha bedelay. Halka 57,5% guryaha la iibiyay ay si wada jir ah u qaataan ragga, 31,2% dumarka, 1,8% ragga iyo dumarka, 9,5% ayaa ka baxsan kuwan [More ...]
Kadib fayraska corona ee ka soo ifbaxay Shiinaha oo sababay argagax weyn adduunka oo dhan, nadaafadda gawaarida gaadiidku waxay noqdeen kuwo caan ah. Gaadiidka, halkaas oo celcelis ahaan 100 kun oo qof ay maalin walba ku safraan Kocaeli, [More ...]
Laga soo bilaabo 20 waddan oo loogu talagalay qaybaha loo isticmaali doono habka wax soo saarka "GÜNSEL", oo ah gaariga gudaha iyo tan qaran ee dalkeenna, waxaana soosaareyaasha ay soo saareen Injineero Turki ah oo nooca ugu horreeya ee B9 la soo bandhigi doono 28-ka Febraayo. [More ...]
Raiisel wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa isu diyaarinaya inuu taageero mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee ku xiraya London iyo waqooyiga England, in kasta oo mucaaradka mucaaradka iyo xawaaraha deynta ay jiraan. Khadkan cusub ayaa noqon doona mashruuca kaabayaasha ugu weyn ee Britain iyo Yurub. [More ...]
Dawladdu waxay difaacday taraafikada sicirka xawaaraha sare ee loo yaqaan 'Speed ​​Speed ​​Train (YHT)' iyadoo ereyada "cadaalad darrada la xaliyay". Qiimaynta tigidhada xad-dhaafka ah ee tikidhada macaamiisha ee loo yaqaan 'YHT', ayuu yiri CHP Eskişehir Ku-xigeenka Utku Çakırözer, [More ...]
Saddexda garoon ee Istanbul, khubaradu waxay qiimeeyeen badqabka duulimaadka: “Sabiha Gökçen waa wadada labaad ee laamiga ah.” “Way fikrad fiican tahay in gabi ahaanba la xiro gegada diyaaradaha Atatürk lana gooyo ukunta dahabka ah. [More ...]